Iphrojekthi yeFedora: Ukwazi Umphakathi Wakho kanye Nentuthuko Yayo Yamanje | Kusuka kuLinux
Iphrojekthi yeFedora: Ukwazi Umphakathi Wakho kanye Nentuthuko Yayo Yamanje
Ukufaka kwe-Linux Post | 13/09/2021 06:00 | Ukusatshalaliswa, I-GNU / Linux
Ku I-Universe yamaphrojekthi wamahhala nevulekile ezijikeleza i-GNU / Linux ne Isoftware yamahhala nemiphakathi yomthombo ovulekile, kunamaphrojekthi amahle futhi amakhulu avelela amaphuzu amaningi abalulekile. Isibonelo, emkhakheni we Ukusatshalaliswa / Imiphakathi ye-GNU / Linux ame ngaphandle I-Debian, Ubuntu, Mint, Arch futhi-ke, phakathi kwabanye abaningi Fedora.
Futhi kungukuthi, ngaphakathi kwaziwa "Iphrojekthi yeFedora" kukhona okukhulu futhi okuhle kakhulu Umphakathi izinikele kakhulu ekwakheni okupholile imikhiqizo nezinsizakusebenza eyabantu emhlabeni wonke. Futhi kulokhu okuthunyelwe sizobheka kafushane eziningi zazo.
IFedora 34 isivele ikhishiwe, yazi okusha
Futhi njengoba kungesona okokuqala ukuthi sibhekane nemininingwane ethile ehlobene ne- "Iphrojekthi yeFedora", sizoshiya ngokushesha ngezansi ezinye zezixhumanisi zakamuva mayelana ne- okuthunyelwe kwangaphambilini okuhlobene. Ukuze labo abanentshisekelo yokuwahlola ngemuva kokuqeda lokhu kushicilelwa bakwazi ukwenza kanjalo kalula:
"Inguqulo ezinzile yeFedora 34 isivele ikhishiwe futhi isilungele ukulanda. Le nguqulo entsha yeFedora 34 ifaka phakathi uchungechunge lokuthuthuka okuphawuleka okufanele ukubhekelwe, ngoba izinguquko eziningi zihlobene nokuthuthuka kokusebenza futhi ikakhulukazi eziqondiswe kwi-Hardware.
Isibonelo: Yonke imifudlana yomsindo idluliselwe kuseva yemidiya yePipeWire, manje eseyizenzakalelayo esikhundleni sePulseAudio neJACK. Futhi ngaphezu kwePipeWire ephakeme ngezindlela eziningi, ukusetshenziswa kweWayland nakho kuyabhekwa." IFedora 34 isivele ikhishiwe, yazi okusha
Uhlobo lwe-beta lweFedora 34 selukhishiwe futhi lezi yizindaba zalo
KuFedora bahlela ukwenza ukwahlukanisa bese bekuqamba kabusha njengeFedora Linux
UFedora wethula umlingani wakwaKinoite weSilverblue futhi uhlela nokuthuthela iFreeType iye eHarfBuzz
1 Iphrojekthi yeFedora: People Community and Software Platform
1.1 Yini iPhrojekthi yeFedora?
1.2 Yikuphi ukuthuthuka nezinsiza okunikezayo njengamanje?
1.2.1 Amaphrojekthi amakhulu
1.2.2 Amaphrojekthi Aqhamukayo Nezinsizakusebenza Ezitholakalayo
Iphrojekthi yeFedora: People Community and Software Platform
Yini iPhrojekthi yeFedora?
Ngokusho kwe- Iwebhusayithi esemthethweni i-del "Iphrojekthi yeFedora", ichazwa kafushane njenge:
"Ipulatifomu yomthombo omusha, yamahhala nevulekile yehadiwe, amafu neziqukathi, ezenza abathuthukisi be-software kanye namalungu omphakathi bakwazi ukwakha izixazululo ngokwezifiso zabasebenzisi babo."
Ngenkathi, ngokuhamba kwesikhathi bakhulisa i- incazelo nobubanzi Ngokulandelayo:
Iphrojekthi yeFedora ingumphakathi wabantu abasebenza ndawonye ukwakha ipulatifomu yesoftware yomthombo ovulekile, futhi ukusebenzisana nokwabelana ngezixazululo ezisetshenziswa ngabasebenzisi ezakhiwe ngaphezulu kwaleyo pulatifomu. Noma, ukubeka nje, sakha uhlelo olusebenzayo futhi lwenze kube lula kuwe ukwenza izinto eziwusizo ngalo.
Yikuphi ukuthuthuka nezinsiza okunikezayo njengamanje?
Phakathi kwabaningi amaphrojekthi wamanje nezamanje nezinsizakusebenza, kufanele kugqanyiswe futhi kuchazwe kafushane okulandelayo:
I-Fedora Workstation: Luhlelo Lokusebenza olunokwethenjelwa, olunamandla nolusebenziseka kalula lwama-laptops nama-desktops. Kwakhiwe kucatshangwa ukuthi kusebenza kakhulu kubakhiqizi abahlukahlukene, kusuka kuma-hobbyists nakwabafundi kuya kubachwepheshe ezindaweni zebhizinisi. Inikeza nge-GNOME 3 Desktop Environment kanye neqoqo eliphelele lamathuluzi womthombo ovulekile.
I-Fedora Server: Luhlelo Lokusebenza Kweseva olusekelwa umphakathi, olunikeza abalawuli abanolwazi kunoma yiluphi uhlelo Lokusebenza ukufinyelela kubuchwepheshe bamuva obutholakala emphakathini womthombo ovulekile. Phakathi kwezici zayo eziphawulekayo yizinga eliphakeme lokuhleleka (ukuphatha izinhlobo zezinhlelo zokusebenza nezilimi ezifakiwe).
I-Fedora IoT (i-Intanethi Yezinto): Kunguhlelo lweFedora olunikeza isisekelo esiqinile sezinto eziphilayo ze-IoT. Ilungele amaphrojekthi ahlobene nekhaya, njengasemasangweni ezimboni, amadolobha ahlakaniphile noma ama-analytics ane-AI / ML. Ngaphezu kwalokho, inikeza ipulatifomu yomthombo ovulekile othembekile yokwakha isisekelo esiqinile futhi okulula ukusivuselela.
Amaphrojekthi Aqhamukayo Nezinsizakusebenza Ezitholakalayo
abanye amaphrojekthi nezinsizakusebenza ezikhona yilezi:
Wiki: Ithuluzi lokusebenzisana lomphakathi wakho omkhulu.
Magazine: Iwebhusayithi efundisayo nezindaba yoMphakathi wakho.
Okulandiwe kwe-AltIsigaba esinikeza ezinye izinhlobo zeFedora.
AmadokhumentiIsigaba esiqoqa, sigxile futhi sinikeze yonke imibhalo edingekayo yomsebenzisi.
Izinongo: Iphrojekthi enikeza ama-Editions (Spins) we-Fedora ezindaweni zeDeskithophu ngaphandle kwe-GNOME.
I-Fedora Labs: Isigaba esinikeza ukukhethwa okukhethiwe kokuqukethwe okuqondiswe enjongweni kanye namaphakeji esoftware, njengoba ekhethiwe futhi enakekelwa ngamalungu omphakathi weFedora.
I-CoreOS: Isistimu yokusebenza encane, enezibuyekezo ezizenzakalelayo futhi eqondiswe ezitsheni. Inhloso yabo ukuhlinzeka ngesibambi esingcono kakhulu sezinsiza ukuqhuba umthwalo ophethwe ngamakhonteyina ngokuphepha nangesilinganiso.
I-SilverblueIsistimu yokusebenza yedeskithophu engaguquki (engenakuguqulwa) ehlose ukuhlinzeka ukusekelwa okuhle kokugeleza kokusebenza kwe-container-centric. Lokhu okuhlukile kweFedora Workstation kuhlose imiphakathi yonjiniyela.
Note: Kokuthunyelwe okulandelayo sizocubungula kabanzi mayelana UFedora Silverblue.
Ngokufingqa, njengoba kungabonakala, njengamanje i- "Iphrojekthi yeFedora" kungumphumela ophumelelayo we Umphakathi omuhle kakhulu wabasebenzisi, Onjiniyela kanye nezinye izifundiswa, ezikhiqizile intuthuko enhle kakhulu evulekile, nezinsiza eziku-inthanethi ezisizayo kunoma ngubani ozifunayo futhi azidingayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Iphrojekthi yeFedora: Ukwazi Umphakathi Wakho kanye Nentuthuko Yayo Yamanje
Leyo fedora ithembekile, kuzoba akunjalo. Esinokwethenjelwa ngokuya ngezokuphepha, kunjalo kunjalo. Kepha ngeshwa ukuzinza, kungekudala noma kamuva kuzokuhluleka futhi kukunikeze izinkinga ezinkulu, ngoba zibukhali kakhulu njenge-arch okuthi lapho ungalindelanga ukuthi kuzophuka uma noma. I-Fedora ukusatshalaliswa kwami ​​engikukhethayo, ngaleyo gnome enkulu ukuthi ayikho enye i-gnome efana nayo emhlabeni wonke we-Linux. Kepha njengoba ekugcineni kugcina kuphuliwe, angikusebenzisi. Esikhundleni salokho ukuhlolwa kwe-debian, empeleni kuyinto enkulu engaziwa futhi abantu bakholelwa ukuthi ngoba kubizwa ngokuthi ukuyihlola sekuvele kukwephula, vele kuyakuhlola, hahaha, uma kuvivinywa kepha kugcinwa kugcineke kakhulu kune-fedora, i-arch ngisho nobumnandi . Amaphakeji eza ekuhlolweni asevele esuuuper abuyekezwa futhi okungenani angakunika inkinga encane, kepha akukho lutho olubucayi okufanele ulubuyise kusuka ekuqaleni, ngaphandle kokuthi usebenzise ukuhlolwa nge-kde ne-nvidia yebo, kuzokuthinta impela. Bengilokhu ngivivinywa iminyaka emi-3 futhi ukusatshalaliswa okunginike izinkinga ezimbalwa, ikakhulukazi, izinkinga zero, ngibe nezinkinga eziningi nge-debian ezinzile futhi engathi sína kunokuhlolwa. UFedora wephukile, ukhothama noma uyakutshela kanti ne-manjaro nayo iyagqashuka. Ukuhlolwa kwe-Debian, akuphuli, ukuzinza ngendlela yayo emsulwa.
Sanibonani, Testingsi. Siyabonga ngokuphawula kwakho nokufaka kwakho kusuka kokuhlangenwe nakho kwakho ku-Fedora naku-Debian Testing.
Noma ngubani osebenzise iFedora kule minyaka engu-5 edlule uyazi ukuthi abanalutho lokufisa iDebian ngozinzo nakanjani i-Arch ngokuba nohlelo olusha. Ngaphezu kwalokho, ubuchwepheshe obunqenqemeni, okuyibo obubalayo, kusengaphambili noma kungcono eFedora kune-Arch, ngesizathu esilula sokuthi bavela kuFedora. Ukuphawula kwakho akuhlangene nakancane nendatshana futhi mhlawumbe ungene kuphela ukucasula imimoya. IFedora Workstation izinze njenge-debian ngaphandle kokuphelelwa yisikhathi futhi yesimanje njenge-arch ngaphandle kokwephula uzinzo
Lo mbhalo muhle kakhulu futhi ngibheke phambili ekubuyekezweni kwe-fedora silverblue.
Ngingumsebenzisi weFedora Workstation nomsebenzisi weSilverblue. Ngingumsebenzisi wangaphambilini we-debian, openSUSE, Ubuntu, manjaro, arch, ngikholelwa ukuthi namuhla, i-linux distro ehamba phambili yile:
@Testingsi, ukuhlolwa kweDebian impela akwaziwa, ngiyavuma: abantu bayisebenzisa bengayazi imininingwane. Uma ukhuluma ngokuphepha okuhle ku-Fedora, hhayi ukuzinza, ukuhlolwa kwe-Debian kunenkinga yokushoda kwakho kokubili, ngakolunye uhlangothi ukuvuselelwa kokuphepha kuza * okungenani * ngesonto ngemuva kokuzinza (funda incwajana ngemijikelezo yokubuyekeza amaphakheji ekuhlolweni), ngakho-ke ungaba izinyanga ezimbalwa ngokuphelele ngeFirefox ephelelwe yisikhathi noma noma iyiphi iphakheji ebalulekile ephukile ngenxa yenqubomgomo yayo yokuvuselela, ungenza ukuphina uma nje kungekho kungqubuzana kwenguqulo, futhi sesivele siyazazi izinkinga zokubopha lezo zinguqulo eziletha imodeli yokuthuthuka kwamahhala yesoftware .
Ukubingelela, Oziqedelayo. Siyabonga ngokuphawula kwakho nangokunikela kwakho.
Bathole ukuba sengozini ku-Ghostscript okusetshenziswe yona nge-ImageMagick
I-GNOMEApps1: Izicelo ze-GNOME Community Core